राष्ट्रपतीय चुनाव ढिला गर्ने ट्रम्पको सुझाव, उनकै दलका नेताद्धारा अस्वीकार ! « MNTVONLINE.COM
राष्ट्रपतीय चुनाव ढिला गर्ने ट्रम्पको सुझाव, उनकै दलका नेताद्धारा अस्वीकार !
सिनेटमा बहुमत प्राप्त रिपब्लिकन पार्टीका नेता मिच मककोनेल र हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ्सका नेता केभिन मकार्थी दुवैले राष्ट्रपति ट्रम्पको सुझावलाई खारेज गरे । चुनाव स्थगित गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपति ट्रम्पमा छैन । चुनाव सार्ने भए कङ्ग्रेसले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले हुलाकमार्फत्‌ गरिने बढ्दो मतदानले धाँधली निम्त्याउने सक्ने र गलत नतिजा आउन सक्ने बताएका थिए । मानिसहरूले ठीक र सुरक्षित ढङ्गलेू मतदान गर्न सक्ने कुराको सुनिश्चतता नभएसम्मका लागि चुनाव सार्ने विचार ट्रम्पले व्यक्त गरेका थिए ।
ह्वाइट हाउसमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भने, म त्रुटिपूर्ण चुनाव भएको हेर्न चाहँदिनँ । यदि यो चुनाव भयो भने इतिहासकै सबैभन्दा धाँधलीपूर्ण हुनेछ । राष्ट्रपति ट्रम्पका दाबीहरूलाई बल पुर्‍याउने एकदमै न्यून प्रमाण छ । तर लामो समयदेखि उनी हुलाकमार्फत् गरिने मतदानविरुद्ध उभिँदै आएका छन् ।
कोरोनाभाइरस महामारीबीच अमेरिकी राज्यहरू जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै हुलाकमार्फत् गरिने मतदानलाई अझ सहज बनाउन चाहन्छन् । सिनेटर मककोनेलले इतिहासमा हालसम्म राष्ट्रपतीय चुनावमा ढिलाइ नगरिएको बताए ।
नेताद्वय मककोनेल र मकार्थी दुवैले अमेरिकी इतिहासमा निर्धारित समयभन्दा चुनावलाई कहिल्यै नसारिएको बताए । ट्रम्पका साझेदार रहेका अर्का सिनेटर लिन्ड्से ग्राहमले चुनावमा ढिलाइ गर्ने विचार राम्रो नभएको टिप्पणी गरे । यसैबीच, पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाले अमेरिकी लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको बताएका छन् ।
ट्रम्पले चुनावमा ढिलाइ गर्न सुझाव दिएको केही घण्टापछि ओबामाको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो । पूर्वसांसद तथा नागरिक अभियानकर्मी जोन लेविसको अन्तिम संस्कारका बेला बोल्दै ओबामाले मतदानको अधिकारमाथि आक्रमण गरी अमेरिकी अल्पसङ्ख्यकहरूलाई निशाना बनाइएको बीबीसीले बताएको छ । मतदान केन्द्रहरू बन्द गर्ने प्रयासहरूको निन्दा गर्दै ओबामाले दिवंगत जोन लेविसले जुन कुराको विरोधमा लडाइँ गरे त्यही कुरा गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे ।